Ifektri Yeminye Imikhiqizo - China Eminye Imikhiqizo Abakhiqizi, abahlinzeki
I-Anti-freeze Carton SealingTape
Iteyipu yokuvala uphawu yaziwa nangokuthi yi -Bopp tape kanye ne-tape tape.Ifanelekile ukugcina izimpahla ezinqolobaneni, ukuthunyelwa kweziqukathi, kanye nokuvimbela ukweba nokuvulwa kwempahla ngokungemthetho. Kungavimbela ukuvuza komkhiqizo noma ukulimala ngesikhathi sokuhamba, kunesici esithile se-viscosity eqinile, ikhono lokulungisa, akukho okusalayo, futhi ukupakisha okungabizi kakhulu.
Ifilimu eliphefumulwayo eliphefumulekayo
Ifilimu eqinisiwe ephefumulekayo enezimbobo zokuphefumula ezinjenge-fishnet ngaphezulu, ezingasheshisa ukusakazwa komoya futhi zixazulule izinkinga eziningi njengokuthola kalula igesi yokuvuthwa, umswakama, inkohlakalo, isikhunta noma ukufingqa, ukuze kuqinisekiswe ukuvuselelwa imikhiqizo yokudla. Ngasikhathi sinye, i-fiber ehlukile yokuqinisa ulwelwesi lokuphefumula nayo ingavimbela ulwelwesi ekuqhekekeni futhi inikeze umthamo wokuthwala umthwalo ongcono.
Ngasikhathi sinye, ifilimu elula yokwelula okuphefumulayo inezinzuzo zesisindo esincane, ukuqina okuhle, ukungena emoyeni okungu-80%, izindleko eziphansi zokupakisha, nokuvuselelwa kabusha. Isetshenziswa kakhulu ekudleni nasekuphuzeni, imikhiqizo yobisi, ukudla kwezilwane zasekhaya, ama-petrochemicals, imikhiqizo yezemithi, izimakethe zemikhiqizo yezolimo, izimakethe zengadi, izimakethe zezimbali, njll.
Iteyipu yokubhala yezinyembezi elula
Itheyiphu yokuvala uphawu ibizwa nangokuthi i-bopp tape, i-packaging tape, njll. Isebenzisa ifilimu ye-polypropylene ebhekiswe ku-biaxially njengempahla eyisisekelo, futhi ngokulinganayo isebenza nge-emulsion yokubambelela ebucayi ngemuva kokushisa ukwenza i-8μm - 28μm. Isendlalelo sokunamathisela siyinto ebaluleke kakhulu empilweni yamabhizinisi akhanyayo ezimboni, izinkampani nabantu ngabanye. Izwe alinayo indinganiso ephelele yomkhakha wamateyipu eChina. Kunemboni eyodwa kuphela ejwayelekile yemboni "QB / T 2422-1998 BOPP ingcina ezwela ingcindezi yokubamba uphawu" Ngemuva kokwelashwa kwengcindezi ephezulu yefilimu yaseBOPP yasekuqaleni, kwakheka indawo enokhahlo. Ngemuva kokufaka i-glue kuyo, umqulu we-jumbo wakhiwa kuqala, bese usikwa waba yimigqa emincane yokucaciswa okuhlukile ngomshini wokusika, okuyi-tape esiyisebenzisayo nsuku zonke. Ingxenye eyinhloko yengcindezi yokubambelela emulsion ebucayi i-butyl ester.
I-anti-ultraviolet masking tape
I-masking tape inezici zokumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana okuhle namakhemikhali awancibilikisayo, ukunamathela okuphezulu, izembatho ezithambile futhi akukho glue osalayo ngemuva kokudwengula.Kulungele zonke izinhlobo zomkhakha wokuhlobisa, imboni ye-elekthronikhi, imboni, izicathulo nokunye ukusetshenziswa, okuhle ukumbozwa nokuvikelwa.